Hetsika andiany faha-2 io tamin’ity taona 2019 ity. Nahatratra 80 ny isan’ireo ankizy vita hasoavana, ireo ankizy eo anelanelan’ny 2 ka hatramin’ny 8 taona no nahazo ny anjarany tamin’izany. Isaorana manokana Ramatoa Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, fa noho ny fangatahan’ireo mponina tsy nahatratra ny andiany voalohany no antony nanaovana ity hetsika faharoa ity, koa dia tsy nikely soroka ny teo anivon’ny Boriboritany faha-4 nananteraka izany, hoy ny delege Solofo Ramahandrimanana. Maro ireo mpiara-miombon’antoka nanampy toy ny teo anivon’ny Mère et enfant, izay nanome ireo mpitsabo nanao ny famorana, ny SOPHARMAD sy ny INTERPHARMA, izay nanome ireo fanafody nentina nanatanterahana ny fandidiana, ary ny teo anivon’ny orinasa JB sy ny Nutrizaza, nanome ireo vokatra ara-tsakafo hoentin’izy ireo atao vatsy. Tsy adino hatrany ny anjara biriky ny teo anivon’ny Boriborintany dia ny fanomezana ireo kilalao maro samy hafa, niampy malabary an’ireo ankizy rehetra. Raha tsiahivina dia efa maro ireo asa sosialy izay efa notontosain’ny teo anivon’ny Boriboritany fahefatra toy ny ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana, fizarana kopia, kara-panondro. Tsy hijanona hatreo anefa ny asa sosialy toy izao fa efa manomana ny hetsika manaraka indray izy ireo dia ny mariazy faobe sy ny fizaham-pahasalamana miampy fizarana fanafody ka handraisan’ny Lefitra voalohan’ny Boriborintany fahefatra, Dokotera Rambolamasoandro, an-tanana manokana ny hetsika fitsaboana.